Morata oo qarka u saaran inuu garoomada seego lix isbuuc. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Morata oo qarka u saaran inuu garoomada seego lix isbuuc.
Morata oo qarka u saaran inuu garoomada seego lix isbuuc.
Posted by: radio himilo October 3, 2017
Muqdisho – Weeraryahanka Chelsea, Alvaro Morata ayaa wajahaya muddo dheer madaama uu dhaawac kasoo gaaray kulankii Manchester City.
Saxiixa rikoorka cusub ee Morata ayaa lagu qasbay inuu ka baxo Garoonka 35 daqiiqo kulankii ay Blues 1-0 qasaaraha ah kala kulantay City.
24 jirkan oo ugu soo guuray Stamford Bridge xagaagii Real Madrid 70 milyan ginni, ayaa laga saaray xulka Spain ee isreebreebka Koobka Adduunka oo ay la leeyihiin Albania Jimcaha: iyo Israel Isniintii sababo la xiriira dhibaatada dhaawac.
Xiriirka kubada cagta Spain ayaa mar kale xaqiijiyay in baaritaanka MRI uu muujiyay in weeraryahanku uu soo gaaray heerka 2aad ee dhaawiciisa muruqa.
Cabsida ugu horreysa ayaa soo jeedinaysa in weeraryahankii hore ee Real uu maqnaan doono inta ka harsan bisha October, isagoo awoodi kara inuu ku laabto kooxda koowaad ee bartamaha bisha November.
Michy Batshuayi oo Belgium ah ayaa haatan ah kooxda ninka kaliya ee la aqoonsan yahay ee ka tirsan kooxda Galbeedka London.
Kooxda difaacaneysa horyaalka ee Chelsea ayaa wajaheysa afar kulan oo Premier League ah waxa ay marti u yihiin Crystal Palace kahor inta aysan marti gelin Watford iyo Manchester United, 5ta November waxa ay u safreysaa Bournemouth inta u dhaxeysa fasaxa caalamiga ah,
Morata oo dhaliyay 7 gool 10-kii kulan ee ugu horeysay ee uu u saftay Chelsea, ayaa sidoo kale waxaa la rajeynayaa inuu seego kulankaan labadan koox ee Serie Ada ah kooxda ka dhisan Roma ee Champions League.
Qore: Hanaa Maxamud Maxamed.
Previous: Ancelotti oo qorsheynaya inuu fasax toban bilood ah ka qaato maamulidda Kubada Cagta.
Next: Barnaamij loo sameeyay ragga doonaya inay xaasas badan guursadaan!